အချစ်ဇာတ်လမ်းသစ်ကြောင့် 2022 ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးစုံတွဲဖြစ်လာမယ့် Yang Mi နဲ့ Xu Kai
ထိပ်တန်းမင်းသမီး Yang Mi ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဆိုရင် အပိုအလိုမရှိတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ကြည့်ရှုသူအများ စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ရကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေဟာ အားပေးဖို့အတွက် Yang Mi ကို ဇာတ်လမ်းတွဲတွေများများစားစား ရိုက်ကူးစေချင်ကြတာပါ။ မကြာခင်ထွက်လာတော့မယ့် “She and Her Perfect Husband” မှာဆိုရင်တော့ Yag Mi ဟာ သူမထက် အသက် (၉) နှစ်ကျော်ငယ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲ Xu Kai နဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားပြီး ၂၀၂၂ ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးဇာတ်လမ်းစုံတွဲတွေအဖြစ် နေရာယူပါတော့မယ်။
ပရိသတ်အချစ်တော်သရုပ်ဆောင် (၂) ဦးရဲ့ “She and Her Perfect Husband” ဇာတ်ညွှန်းလေးကတော့ ထင်မှတ်မထားဘဲနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ရပြီးမှ အချစ်နွံထဲကို သက်ဆင်းခဲ့ရတဲ့ စုံတွဲလေးအကြောင်းပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့… Qin Shi (Yang Mi) ဟာ အလုပ်ကလွဲပြီး ဘာမှမသိတဲ့ ရှေ့နေအပျိုမလေးတစ်​ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း မိဘတွေကတော့ “သမီးကညာ အခါမလင့်” ဆိုတဲ့အတိုင်း အရွယ်မလွန်ခင် သင့်​တော်မယ့်သူနဲ့ လက်ထပ်စေချင်နေကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် မိဘတွေနဲ့ အချေအတင်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ အစ်ကိုဖြစ်သူဟာ Qin Shi ကို အသိမပေးဘဲနဲ့ နာမည်ကြီးရှေ့နေကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လျှောက်လွှာတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့နေရုံးရဲ့ အလုပ်ခေါ်စာဟာ အိမ်ထောင်ရေးကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရှေ့နေတွေကိုခေါ်ယူတာဖြစ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကတော့ အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ရှေ့နေတွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှိပြီးသားသူ ဖြစ်ရမှာပါ။ ဒါကို အစ်ကိုဖြစ်သူက လက်ထပ်ပြီးသားမိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် Qin Shi ကို လိမ်ညာကာ လျှောက်လွှာတင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။
အလုပ်ရပြီးနောက်ပိုင်း ကန့်သတ်ချက်ကိုသေချာမသိတဲ့ Qin Shin ဟာ အမှုကိစ္စတွေကိုကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်နေရင်းနဲ့မှ Qin Shin ဟာ သူ့ကိုယ်သူ အိမ်ထောင်ကျပြီးသားဆိုတဲ့အကြောင်း ထိတ်လန့်စွာသိခဲ့ရပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့ ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ လုပ်နေစဥ်မှာပဲ သူမရဲ့ယောက်ျားပါဆိုပြီး Yang Hua (Xu Kai) က ဘွားကနဲ ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့… နှစ်ယောက်သားရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်လာကြမလဲ?
Yang Hua ကလည်း Qin Shin ကို ဘာလို့ သူ့ရဲ့မိန်းမအဖြစ် လက်ခံခဲ့တာလဲ? အိမ်ထောင်မပြုချင်တဲ့နှစ်​ယောက်သား လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူနေလာကြတဲ့အခါ အချစ်တွေပေါက်ဖွားလာမလား? ချစ်လို့လက်ထပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လပ်ထပ်ပြီးမှ ချစ်သွားကြမလား? ဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို Ro ဆန်မှုအပြည့်နဲ့ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာပါ။
Xu Kai ဟာ Yang Mi နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်သရုပ်ဆောင်ရတာမို့လို့ အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြောဖူးတဲ့အပြင် “She and Her Perfect Husband” ထဲက သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာ သူသရုပ်ဆောင်နေကျပုံစံနဲ့ ကွဲထွက်နေကြောင်း​လည်း ပြောပြခဲ့ဖူးတာကြောင့် မမနဲ့မောင်လေးကြားက အပိုင်း (၄၀) ကြာတဲ့ Ro ဆန်မှုတွေကို အပီအပြင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှာပဲ ပြသခွင့်လိုင်စင် ရခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ၂၀၂၂ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Previous post Lady Gaga, Harry Style အစရှိတဲ့ Fashion Icon တွေနဲ့ အပြိုင် 2021 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Dresser စာရင်းထဲမှာ ပါလာတဲ့ Kai
Next post ညီငယ်လေး​တွေရဲ့ အမိုက်စား ပူး​ပေါင်းတင်ဆက်မှုအတွက် ချီးကျူး​​ထောပနာပြုခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် J-Hope